Mowliid: ‘Nabi Muxammad NNKH isaga ayaa billaabay inuu xuso dhalashadiisa’ | Dayniile.com
Home Warkii Mowliid: ‘Nabi Muxammad NNKH isaga ayaa billaabay inuu xuso dhalashadiisa’
Sanad walba bisha Rabiicul-Awal waxaa inta badan dalalka muslimiinta ee sunniga ah laga xusaa dhalashada Nabi Muxammad Nabadgalyo iyo Naxariis Korkiisa Ha ahaatee, inkastoo ay jiraan dad kale oo kasoo horjeeda fikirkaas.
Magaalooyinka Soomaalida, oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo la xiriira dabaaldagga maalintii uu dhashay Rasuulka.
Laakiin culimada Salafiyiinta oo ah dadka doodda ka qaba arrintaas waxay ku tilmaameen ficil “bidco” ah oo aan waafaqsaneyn diinta Islaamka.
“Dhalashada rasuulka CSW dadka Muslimiinta ah markii bisha Mowliid lasoo gaaro sanad walba, khaasatan maalintii isaga uu dhashay waxay u xusaan shukrin lagu shukrinayo nimcadan oo Rasuulka ah CSW, maxaa yeelay haddaan nahay Muslimiin waxaan aaminsan nahay inuu yahay nicmo loogu talogalay dhammaan basharka, marka nimcadaas ayaa lagu shukrinayaa,” ayuu yiri Sheekh Xuseen.
“Culimadu waxay usoo daliishanayaan xadiiskii Bukaari iyo Muslim ay warinayeen, kaasoo sheegaya in rasuulku uu yimid magaalada Madiina, wuxuu u yimid yuhuuddii meelaha kala duwan dagganeyd oo soomeysa, soonkooda waxa uu ku beegnaa maalinta Caashuura ee 10-ka bisha Muxarram.
“Rasuulku wuu weydiiyay sababta ay u soomayeen waxayna u sheegeen in ay xusayaan iyagoo Alle ku shukrinaya maalintii uu Nabi Muuse CS Alle ka badbaadiyay fircoon iyo ciidankiisa, kuwii kalena la halaagay. Markaas ayuu nabigeennu yiri ‘annaga ayaa idiinka xaq leh nabi Muuse, sababtoo ah idinku waad i beeniseen laakiin annagu waan rumeysan nahay nabi Muuse iyo kitaabka Tawraat.
“Rasuul wuu soomay, dadka muslimiinta ahna wuu faray inay soomaan. Xadiiskaas waxaa laga faa’iideysnaayaa, sida uu Xaafid Ibnu Xajar ku leeyahay Kitaabkiisa Al Fatxul Baari, in la sameynayo ficil shukriga ku tusinaya oo Alle looga mahad celinayo nimco la isku galladeystay,” ayuu yiri.
Sheekh Xuseen ayaa intaas ku daray in Rasuul NNKH “dabaaldaggiisa lasii billaabay isagoo dhalanin, oo lagu sheegay kitaabadii ka horreeyay ee Towraad iyo Injiil”.
Daliil kale ayuu sheegay inuu yahay markii nabiga la weydiiyay mid ka mid ah maalmihii uu soomi jiray oo Isniin ah, “taasoo uu ku jawaabay inay tahay maadaama ay tahay maalintii la dhalay oo uu xusayo”.
‘Nabiga isaga ayaa billaabay xuska dhalashadiisa’
“Nabi Mucammad (NNKH) waxaa la weydiiyay sababta uu u soomo maalinta Isniinta ah. Nabiguna wuxuu ku jawaabay taasi waa maalintii aan dhashay,” ayuu yiri Sheekh Halliru.
Waxa uu intaas ku daray in Muslimiinta laga doonayo inay dabaaldagaan bisha Mowliidka, “maadaama ay tahay bil uu Alle Adduunka siiyay hadiyad aan wax la mid ah jirin, oo ah dhalashada Nabiga, nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Previous articleSidee dib u dhaca doorashada u saameeyey dhaqaalaha Muqdisho?
Next articleIsfaham Hordhac ah ayaa laga gaaray Shaqaaqo hore uga dhacday Deeeganka Gubadleey
Tababarkaan oo socday muddo kow iyo toban maalmood ah, isla markaana taaba galintiisa ay iska kaashanayeen Wasaaradaha arrimaha Gudaha Galmudug iyo Hay’adda UNDP ayaa...
Kormeeraha Guud ee Ciidamada Kenya oo sheegay in Soomaaliya la geyn...
Dhimasho & dhaawac ka dhashay dhisme ku soo dumay Magalada Muqdisho